Vitinha ကို ဘယ်အသင်းတွေက ခေါ်ယူကြမလဲ? - Myanmar Sports
Vitinha ကို ဘယ်အသင်းတွေက ခေါ်ယူကြမလဲ?
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်နဲ့ ပီအက်စ်ဂျီတို့ရဲ့ ပစ်မှတ် ဗီတင်ညာ [ Vitinha ] ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ?
Vitinha ကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဦးဆောင်နေပြီး ဒီကွင်းလယ်ကစားသမားကို ‌ဦးစားပေး ပစ်မှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စာချုပ်ပါ လျော်ကြေး ယူရို သန်း ၄၀ နဲ့ စာချုပ်ဖျက်သိမ်းကြေးက ယူနိုက်တက်၊ ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းနဲ့ ဘာစီလိုနာ အပါအဝင် ဥရောပထိပ်တန်းကလပ် အများအပြားရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိထားပါတယ်။
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာ အရင်က ၂၀၂၀/၂၁ ရာသီတုန်းက ဝုဗ်အသင်းမှာ အငှားနဲ့ ကုန်ဆုံးခဲ့ဖူးပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ပေါင် ၁၇ သန်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ အခွင့်အရေးကို အလယ်အလတ်အသင်းက ရွေးချယ်ဖို့ ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကွင်းလယ်လူ ဗီတင်ညာ [ Vitinha ] ဟာ ပေါ်တိုပထမအသင်းနဲ့အတူ ခြေစွမ်း ကောင်းမွန်တာကြောင့် ပေါ်တူဂီ စီနီယာအသင်းကို ၀င်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အခုနွေရာသီမှာတော့ Primeira Liga [ ပေါ်တူဂီလိဂ် ] ချန်ပီယံအသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
1xBet အကောင့်အသစ် ဖွင့်သူများအနေနဲ့
Promo code (ပရိုမိုကုဒ်) 👉 MMSPORT100 👈 ကိုအသုံးပြုတာနဲ့ 100% ဘောနပ်စ် ရရှိမှာပါ။
ပေါ်တူဂီကစားသမား Vitinha [ ဗီတင်ညာ ] က ဘယ်နေရာမှာ ကစားတာလဲ?
ပေါ်တိုကစားသမားဟာ ညာခြေ ဗဟိုကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်ပြီး ခံစစ်ပိုင်းအပြင် ရှေ့တန်း တိုက်စစ်ပိုင်းလည်း ကစားနိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝုဖ်အသင်းမှာ စိတ်ပျက်စရာ အငှားနဲ့ လိဂ်ပွဲ ၅ ပွဲသာ ကစားခဲ့ရပြီးနောက် ကွင်းလယ်ကစားသမားဟာ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပေါ်တိုရဲ့ ပထမဆုံးအသင်းထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပေါ်တိုကွင်းလယ်လူဟာ အခုရာသီမှာ ပေါ်တိုအသင်းအတွက် အရေးပါတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ရာသီတစ်လျှောက် ပေါ်တိုအသင်းမှာ သူ့ထက် မိနစ်ပိုကစားတဲ့ အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား ၃ ဦးသာ ရှိပါတယ်။ သူဟာ နှစ်ဂိုးသွင်းပြီး ၃ ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့အပြင် ဒီဇင်ဘာနဲ့ ဇန်နဝါရီလတွေမှာ လိဂ်တစ်လတာ အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူသည် ဥရောပတွင် အကောင်းဆုံး ဘောလုံး အလိမ်အခေါက် အောင်မြင်မှုနှုန်း ၇၂.၇% ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် ခံစစ်အပိုင်းမှာလည်း ပုံဖေါ်ကစားနိုင်တာကြောင့် လူသိများတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်ကွင်းလယ်လူ ဗီတင်ညာဟာ အငယ်တန်းအဆင့်မှာ ပေါ်တူဂီကို ကိုယ်စားပြုပြီး အသင်းအမျိုးမျိုးကို ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ယူ-၂၁ ဥရောပချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၂၂ အစောပိုင်းမှာ ပေါ်တူဂီ စီနီယာအသင်းဆီ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးခေါ်ယူမှုကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်ကလပ်အသင်းတွေက ဗီတင်ညာကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေကြတာလဲ?
မန်ယူအသင်းဟာ ဗီတင်ညာကို ခေါ်ယူဖို့ ဦးစားပေး ရှေ့ပြေးကစားသမားလို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။ ဘာစီလိုနာကွင်းလယ်လူ ဖရန့်ကီ ဒီဂျောင်အပြင် ဒီကွင်းလယ်ကစားသမားကိုပါ ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေပေမယ့် ပီအက်စ်ဂျီအသင်းကလည်း ကစားသမားရဲ့ ထွက်ခွာခွင့် စာချုပ်ကို အသက်ဝင်လာစေဖို့ စဉ်းစားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အာဆင်နယ်၊ လီဗာပူးလ်နဲ့ မန်စီးတီးအသင်းတို့ကလည်း ဗီတင်ညာကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ချိတ်ဆက်မှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ သူ့ကို ချဉ်းကပ်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်လို့ မပြောသေးပါဘူး။
ပေါ်တိုဆီကနေ ဗီတင်ဟာအတွက် ယူရိုသန်း ၄၀ ကိ ပီအက်စ်ဂျီအသင်း ပေးချေနိုင်။
ပီအက်စ်ဂျီအသင်းဟာ ပေါ်တိုက ဗီတင်ညာကို ခေါ်ယူဖို့ ယူရို သန်း ၄၀ ပေးချေနိုင်တယ်လို့ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရှိရပါတယ်။။ Paris Saint-Germain [ ပဲရစ်ဆိန့် ဂျာမိန်း ] အသင်းဟာ လာမယ့် ရာသီမှာ အသင်းအတွက် ပါဝင်ဖို့ ကစားသမားတွေကို ရှာဖွေနေပြီး ဗီတင်ညာကို အငှားနဲ့ ခေါ်ယူဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
အသက် 22 နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ ပေါ်တူဂီကွင်းလယ်ကစားသမားဟာ လက်ရှိနှင့် အနာဂတ်နှစ်ရပ်စလုံးအတွက် အားဖြည့်ပေးသူအဖြစ် ရှုမြင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပြင်သစ်ကလပ်အသင်းရဲ့ ချိတ်ဆက်မှုမှာ လွတ်လပ်စွား ပြောင်း‌ရွှေ့နိုင်ဖို့ စာချုပ်ပါအချက်တွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဝုဗ်အသင်းမှာ အငှားသွားကစားခဲ့တဲ့ ဗီတင်ညာ။
‘SIC Notícias’ သတင်းဌာနက ဂျာနယ်လစ် Pedro Sepúlveda [ ပက်ဒရို ဆက်ပူဗက်တာ ] ရဲ့ အချက်အလက်တွေအရ PSG အသင်းဟာ ပေါ်တိုအသင်းနဲ့ ကစားသမားရဲ့ စာချုပ်မှာ ဖျက်သိမ်းကြေး ယူရို သန်း ၄၀ ကို ပေးချေဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပေါ်တိုအသင်းအနေနဲ့ ဒီပမာဏထက်နည်းတဲ့ ပမာဏကို ထုတ်ပြန်ဖို့ လက်မခံပါ။
အဆိုပါလမ်းကြောင်းဟာ လာမယ့် ရက်တွေမှာ သူ့ကို Paris Saint-Germain အသင်းကအငှားနဲ့ ခေါ်ယူခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခု ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဝုလ်ဗာဟမ်တန်အသင်းမှာ အငှားနဲ့ လာရောက်ကစားခဲ့ပြီးနောက် ပေါ်တိုရဲ့ အရေးပါတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ စုစုပေါင်း ၄၇ ပွဲမှာ ၄ ဂိုးသွင်း၊ ဂိုးဖန်တီးမှု ၅ ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး ပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင်အသင်းဆီ ခေါ်ယူဖို့ အာမခံချက် ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာ သတင်းကောင်းတွေကို နေ့စဥ်မလွတ်တမ်း ဖတ်ရှုနိုင်အောင် ညာဘက်အောက်က
Categories: Football, အားကစားသတင်းများ Tags: Porto, Portugal, Vitinha | Comments
← Lukaku ရဲ့ အင်တာမီလန်ကို အပြန်လမ်း
Raheem Sterling ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ →